Global Voices teny Malagasy » Mpitsoa-Ponenana Irakiana Tody Tany Eoropa Nisafidy Ny Hody Any Aminy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Avrily 2016 14:52 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Alemaina, Bolgaria, Iràka, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana
Dana Maghdeed Aziz mihazona ny taratasy mombamomba azy nomen'ny governemantan'i Alemaina. Sary: Rebecca Collard
Ity lahatsoratra nosoratan'i Rebecca Collard  ity dia niseho voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 21 Aprily, 2016, ary navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny Septambra 2014, nanapa-kevitra i Dana Maghdeed Aziz fa tsy afaka hijanona intsony ao Iraka izy. Mifehy ny tanànany , Mahkmour, ny ISIS ary tsy misy fanantenana ny ho avy. Dia nivarotra ny fiarakaretsakany izy sy ny firavaka sasany an'ny vadiny, ary nisambo-bola tany amin'ny fianakaviany. Ary nandray fiaramanidina ho any Torkia izy avy eo.
“Nividy pasipaoro sandoka aho tao Torkia ary niezaka mba ho any Boligaria nefa tratran'ireo aho ka nalefany tany am-ponja”, hoy i Aziz. “Nolazaiko izy ireo fa tsy mpamono olona aho. Mpitsoa-ponenana tsy ara-dalàna mitady fialokalofana fotsiny aho. “
Nentina tany amin'ny toby iray tao Boligaria i Aziz, ary nolazaina izy mba hitady fialokalofana any. Nefa tsy te-hijanona ao amin'ilay firenena izy, ka nitsoaka.
“Nanandrana nanao zava-drehetra aho hahatongavana any Alemaina,” hoy izy teo am-pisotroana kafe.
Tamin'ny Martsa 2015 tonga tamin'izany ihany izy ny farany. Ny hahazo fialokalofana ao Alemaina no tanjony ary hanorina fiainam-baovao ho an'ny vadiny sy ny zanany roa, izay niandry tao Erbil hamonjy azy.
Nefa efa ho herintaona tatỳ aoriana, mbola tsy nahafantatra izy raha mety hanome azy fialokalofana i Alemaina na ho avela hamonjy azy ny fianakaviany . Efa feno hika i Alemaina. Vao tamin'ny herintaona, nandray fangatahana fialokalofana vaovao 500.000 io firenena io.
Karatra alemà famantarana an'i Dana Maghdeed Aziz teo ambony latabatra tao amin'ny fisotroana kafe ao Erbil. Taorian'ny volana maromaro tao Alemaina tsy mbola fantany na hahazo fialokalofana izy na tsia. Sary: Rebecca Collard
“Nanao ny antsafa momba ny fialokalofana voalohany aho ny volana Jolay 2015. Nilaza ry zareo fa mety haharitra telo volana izany. Mbola tsy fantatro ihany anefa izany tamin'ny Desambra,” hoy i Aziz. “Avy eo, tamin'ny Janoary,narary ny zanako .”
An-tampon'izany rehetra izany, tsy navela hiasa i Aziz teo ampiandrasana. Nipetraka tamin'ny trano nomen'ny governemanta izy ary nomena fanampiana 325 euro isam-bolana avy amin'ny governemanta alemà (eo amin'ny 365 $ eo).
Toy ny Irakiana maro, izay nandeha tany Eoropa, Aziz no mpamelona ny fianakaviany. Nefa ankehitriny tsy afaka mandefa vola any aminy izy.
“Tsy maintsy nivarotra ny sisa tamin'ny firavaka volamena ho fanohanana ny fianakaviana ny vadiko,” hoy izy.
Tamin'ny Febroary, nilefitra i Aziz . Nandeha tany amin'ny masoivoho Irakiana ao Frankfurt izy mba hahazoana antontan-taratasin'ny dia miverina ihany ary nody any aminy.
Dana Maghdeed Aziz mihazona ny karatra ahazoany ny fanampiana avy amin'ny governemantan'i Alemaina. Sary: Rebecca Collard
Iray amin'ireo Irakiana 5.000 efa niverina nanomboka tamin'ny Oktobra miaraka amin'ny fanampian'ny Fikambanana Iraisampirenena ho an'ny Mpifindramonina izy. Mbola maro ireo Irakiana no niverina nody, satria tsy mahazaka hiandry fanampiana.
Nisy mpiambina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Erbil, niteny hoe nitondra olona betsaka niverina ny sidina rehetra avy any Alemaina. Tamin'ny sidina iray vao haingana, nisy valo, farafahakeliny, ny Irakiana nody rehefa avy nanao dia lafo sy mampidi-doza mankany Alemaina. Anisan'izany i Samad, izay tsy te hampiasa ny anarany. Tamin'ny volana Desambra, hoy izy, namidiny ny taniny, ary nandoa vola tamin'ny mpanao trafika mba ho any Alemaina izy.
“Nanaraka olon-kafa fotsiny aho. Nilaza izy ireo fa misy fiainana tsara kokoa any Eoropa, “hoy i Samad. “Te hahita izany ny tenako.”
Fa nandiso fanantenana ny zavamisy.
“Nanantena fiainana miadana aho sy hoe hanome anay fanampiana izy ireo,” hoy izy. “Nefa tena sarotra izany.”
Toa an'i Aziz, tsy fantany raha homena fialokalofana izy na ho afaka hiaraka aminy any Alemaina ny vadiny sy ny zanany telo. Ary niezaka ny hanohana ny fianakaviana avy any lavitra any izy.
“Ao amin'ny toby hatrany izahay. Nizara efitrano miaraka amin'ny olona valo aho ary tsy navela hiasa”, hoy i Samad. “Raha misy fanantenana fa hahazo fialokalofana tsy ho ela aho, dia efa nijanona aho. Saingy tsy nisy ny fanantenana. “
Raha manana ny herijika tsara hahazo fialokalofana any Alemaina ny Syriana, dia tsy azo antoka izany ho an'ny Irakiana. Tsy andrin'i Samad izay hiverenana, tsy niandry fanampiana izy. Nandany ny fara-volany mba hividianany tapakila hiverina any Erbil izy.
“Namidiko daholo ny zavatra rehetra mba handehanako tany,” hoy izy.
Nony tafaverina tao amin'ny fisotroana kafe tao Erbil i Aziz dia nanazava fa raha niaraka taminy tany Alemaina ny fianakaviany, dia tsy niverina intsony tany Iraka izy.
Lasan'ny vondro-tafika Kiorda indray ny tanànany ankehitriny, fa mbola eo ambava ady izany. Ary tsy mino izy fa azo antoka ny miverina. Ankehitriny izy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniny ao an-tanàna, mitady asa.
Samy miainga amin'ny tsy misy indray izao i Aziz sy i Samad – tsy manana fiarakaretsaka, tsy manana asa, tsy manambola. Nandany efa ho herintaona tany Eoropa i Aziz ary tamin'ny farany dia tsy nanana na inona na inona hireharehana amin'izany.
“Mazava ho azy fa nanenenako ilay izy”, hoy i Aziz. “Nandany ny volako rehetra aho tamin'ny tanjona izay tsy tratrako. Ankehitriny, aty amin'ny taniko aho, ary tsy afaka akory na dia hividy kafe iray kaopy aza. “
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/25/81860/
 niseho voalohany tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2016-04-20/feisty-12-year-old-shows-us-what-life-nepal-after-earthquake